कति खाने नुन ? - Baikalpikkhabar
नुन स्वादको पर्याय हो । नुन विनाका परिकार निस्वाद लाग्छन्। स्वादका दृष्टिले मात्र होइन, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि नुन अत्यन्त महत्वपूर्ण यौगिक हो । तर अनुचित मात्रामा प्रयोग गरिएको नुनको सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक सावित हुनसक्छ।
नुनको महत्व कति छ भनेर आकलन गर्न कहिलेकाहीं ब्रत, उपबास बस्दा वा आशोच,जुठो बार्दा गरिएको नुन त्यागपछिको भोगाइ सबैको मस्तिष्कमा ताजा हुनसक्छ।
नुनको अनुचित प्रयोग स्वास्थ्यको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । धरै नुन सेवनले रक्तचाप बढ्ने, मुटुरोग लाग्ने, शरीर सुन्निने जस्ता समस्या हुनसक्छ भने कम नुन सेवन शरीरबाट पानी खेर जाने, स्नायू तरंग परिवहनमा समस्या देखापर्ने, मांसपेसी खुम्चिनमा समस्या देखापर्ने जस्ता समस्या देखापर्छन्।
के हो नुन ?
नुन सोडियम र क्लोरिन नामका दुई तत्वले बनेको हुन्छ। हामीले खाने नुनमा ४० प्रतिशत सोडियम र ६० प्रतिशत हिस्सा क्लोराइडको छ । सोडियम शरीरलाई नभई नहुने तत्व हो र शरीरलाई चाहिने सोडियमको मुख्य अंशको पूर्ति पनि नुनबाट नै हुन्छ ।
आयुर्वेदमा पाँच प्रकारका नुन सिन्धव लवण, विड लवण, समुन्द्र लवण, सौर्वाचल लवण र सम्बर लवणको वर्णन गरिएको छ। सोडियम र क्लोरिनका अलावा नुनमा क्याल्सियम, पोटासियम, फलाम, जस्ता आयोडिन जस्ता धातुहरु पनि पाइन्छ ।
नुन शरीरलाई अत्यावश्यक खनिज हो । नुनमा विद्यमान सोडियमले शरीरका कोषहरुको बाहिरी भागमा अवस्थित तरल पदार्थको अस्मोटिक प्रेसरलाई सन्तुलित राखी शरीरमा पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
यसैगरी कोषको स्थिर विद्युत विभव र कार्यगत विद्युत विभव उत्पन्न हुनका लागि पनि सोडियम आवश्यक पर्छ । यसैगरी नुनमा विद्यमान क्लोरिनले पनि शरीरमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाउन मद्दत गर्छ ।
नुन मुख्यतः खानी खनेर र समुन्द्रको नुनिलो पानीलाई सुकाएर जम्मा भएको अवसाद बटुलेर तयार गर्ने गरिन्छ । खानी खनेर निकालिएको नुनलाई सिधै नुन वा हिमालयन पिंक साल्ट भनिन्छ भने समुन्द्रबाट निकालिएको नुनलाई सामुन्द्रिक लवण भनिन्छ।
वयस्क व्यक्तिले दैनिक ५ ग्राम नुनभन्दा कम लिनुपर्छ भने केटाकेटीले १/२ ग्रामभन्दा ज्यादा लिनु हुँदैन । अझ सोडियमको मात्रामा भन्नु पर्दा दैनिक १५०० मिलिग्राम सोडियम उत्तम हो । यो मात्रा २ हजार ३०० मिग्राभन्दा ज्यादा हुनुहुँदैन।
उच्च मात्रामा नुन सेवनले रक्तचाप बढाउँछ । नुनको उच्च मात्राले रक्तचाप बढाउने हुँदा मुटुरोग र मस्तिष्कघातको खतरा पनि बढ्छ । नुनको कारणले हुने उच्च रक्तचापलाई लवण संवेदनशील उच्च रक्तचाप भनिन्छ । लवण संवेदनशील उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई नुन बार्न थाल्दा रक्तचाप कम हुन्छ । तर स्वस्थ व्यक्तिले नुन बार्दा रक्तचापमा खासै फरक पर्दैन । एउटा अनुसन्धानले स्वस्थ व्यक्तिले नुन छोड्दा सिस्टोलिक रक्तचाप २.४२ मिलिमिटर अफ मर्करी (एमएमएचजी) ले र डायस्टोलिक रक्तचाप १ (एमएमएचजी) ले घटेको तथ्य पाइएको छ।
कम नुन पनि हानिकारक
शरीरमा नुनको मात्रा ज्यादै कम भयो भने अनेकौं प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु देखा पर्न सक्छन्।
– नुनको उच्च मात्राले सोडियमका साथसाथै क्लोरिनको पनि उच्च मात्रा शरीरमा थप्छ । उच्च मात्रामा क्लोरिन लिँदा पेटमा हाइड्रोक्लोरिक अम्लको उत्पादन ज्यादा हुन्छ र एसिडीटी, रिफ्लक्स डिजिजजस्ता रोगहरू लाग्ने र अन्तत्वगत्वा ग्यास्ट्रिक, क्यान्सरको समस्या देखापर्छ।
– उच्च मात्रामा नुनको सेवन गर्दा सोडियमको मात्रा डाइल्युट गर्न शरीरले अतिरिक्त पानी धारण गर्ने गर्छ । अतिरिक्त पानीले रगतको मात्रा र बहिरकोषकीय पानीको मात्रा पनि बढाउँछ। यसरी रगतको मात्रा बढ्दा रक्तचाप बढ्न गई मुटु रक्तनलीलाई अतिरिक्त दबाब पर्छ । रक्तचाप बढ्दा मुटुरोग, हृदयघात, मस्तिष्कघात, मिर्गौलाघात, दृष्टिघात जस्ता समस्या देखा पर्छन्।
डा.कोइराला भरतपुर–१, बागिश्वरी चितवनस्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयका मेडिकल डाइरेक्टर हुन् ।
बिहिबार, १७ असार, २०७८, रातीको ०९:२३ बजे